Niara-Disability In A Eoropa Made Easy | Save A Train
Home > Travel Europe > Niara-Disability In A Eoropa Made Easy
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 05/06/2020)
Nahoana isika no mandeha lamasinina? Train Travel no sasatra, azo ampiharina sy manolotra ny endrika ara-tsosialy fa fomba fitaterana fotsiny hafa tsy mifanaraka. Na izany aza, niara-manana fahasembanana dia mety ho sarotra amin'ny sasany. Tsy midika akory izany tsy afaka mankafy ao amin'ny fahafinaretana, anefa. Ity lahatsoratra ity dia manome fototra faritra sasany izay mila Diniho rehefa mieritreritra ny fiaran-dalamby nankany dia niara-manana fahasembanana any Eoropa dia tsy saina.
Na dia misy zava-tsarotra tokoa ny sasany Accessibility, ny tena zava-misy fa arakaraka ny fikarohana ataonao, dia vao mainka mora sy mahafinaritra ny diany dia ho! Ohatra; Fantatrao ve fa ny sisan-javatra rava Herculanum dia efa ho mitovy amin'ny Pompéi, fa ireo seza misy kodiarana-namana? Ary izany Cruise mpandeha manana fahasembanana Tsy voatery handray ny “boriky lalana” ny harambato, rehefa nitsidika ny nosy grika Santorini? Ny vakansy dia tsy tokony ho ny tolona - hanaovana devoara sy ny diany dia afaka ho feno tanteraka azon'ny trano fandraisam-bahiny, azo idirana lalana eo idirana mpizaha tany attractions, ary mahafinaritra azo idirana Travel traikefa.
Iza Train mba handray Save-A-Train raha toa ianao ka niara-manana fahasembanana?
Raha manana safidy maro misy anao (tany sasany manana rafitra iray ihany ny lalamby), hiezaka ny hisafidy ny mitondra izay manome tolotra mifanaraka indrindra ny fitetezam-paritany miaraka amin'ny fahasembanana filàna. Izany hoe; Kilasimandry fanampiana sy mora natory fiara. Kabine aho koa dia tokony ho habe antonona anao sy ny seza misy kodiarana sy ny tsy manara na mpanompo. Toy ny mahazatra, manontany na iza na fanontaniana araka izay azonao atao mialoha mba hisorohana ny tsy ampoizina ilaina!
Misy ao sy ny Services
Special Traveling amin'ny fanompoana fahasembanana dia mety miovaova arakaraka ny faritra hafa, miankina amin'ny fepetra maro; ny fiara eo amin'ny fiaran-dalamby manokana, ny trano ao amin'ny isan-karazany stations eny ny lalana ary na dia ny mitondra ny politika eo amin'ny Accessibility.
Diniho ny tapakila sy ny faritany haleha izy indray mandeha tsara ianao mandray izany. Hahazoana antoka fa mahazo aina ianao sy ny politika sy fepetra mba tsy gaga ny amin'ny fijanonana kely isan-karazany (indrindra rehefa mandeha any ampitan-dranomasina).
Ramps sy ny Weight Limits
Mahazo eo ary ho eo amin'ny fiaran-dalamby dia mazava ho azy fa manan-danja ilay dia anisan'ny. ho azo antoka ny lasa sy ny toby tonga dia fitaovana avo lenta sehatra na manandratra seza misy kodiarana. Izany dia ho mora kokoa izany zavatra izany mba hiakatra sy eny amin'ny lamasinina mandritra ny diany miaraka amin'ny fahasembanana.
Milan ho Pompei Lamasinina
Florence ho Pompei Lamasinina
Salerno ny Pompéi Lamasinina
Ny ankamaroan'ny mpitondra dia hanao araka izay fara heriny mba handraisana ny olona mandeha miaraka amin'ny kilema sy ny hery anaty fanampiny entana dia mety mitaky (e.g. seza misy kodiarana, oksizenina fiara mifono vy, etc.). Raha fantatrao ianao dia mila fepetra fanampiny entana, aoka ny mitondra hahalala mialoha.
Mijanòna any amin'ny faritra azo idirana indrindra ny tanàna. Izany no iray amin'ireo faritra sarotra indrindra ny mieritreritra ny lamasinina nankany raha niara-manana fahasembanana. Mety ho efa nahita lehibe azon'ny trano fandraisam-bahiny, fa inona no hitanao ianao, na mandeha / hakodian'ny olona ny varavarana fidirana? Misy havoana sy ny tohatra rehetra toro-lalana? Ho tsy maintsy manakodiava ny rarivato? Misy toeram-pisakafoanana teo akaiky teo idirana? Zava-dehibe ny fikarohana manodidina ny trano fandraisam-bahiny. Azonao atao ny mampiasa Google Maps Street View mba hahazoana ny laika ny tany, dia mailaka ny trano fandraisam-bahiny amin'ny fanontaniana.
Amin'ny rehetra ny Admin ny lalana, tsarovy ny hitondra ny fotoana haka aina sy hankafy ny traikefa nahafinaritra. Makà fotoana mba hitsena ny mpiara-mpandeha, faly mijery ny varavarankely, na very fotsiny ho vetivety foana rehefa mandeha ny lalana maro no nialoha.
Afaka boky ny tapakila amin'ny fiarandalamby Fiarandalamby haingana indrindra any Eoropa amin'ny Vonjeo-A-Train ny saika rehetra nirotsaka toerana ambony ao 3 minitra, ao amin'ny levitra fiaran-dalamby tapakila tahan'ny ary nesorina ny saram isalasalana famandrihana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana?, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-disability-europe/- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#fahasembanana #seza misy kodiarana Train Travel fiaran-dalamby nankany traveltips